WAJIGA QARSOON EE AL-BARAKAAT!
Posted to the AllPuntland.com November 13, 2001
Dad Somalli ah oo kala duwan ayaan waxaan weeydiiyey goortii ugu
horeeysay ee ay maqlaan AL-BARAKAAT ?
Dhamaantood waxay isku raaceen in ay maqleen dagaalkii sokeeye ka
dib. Marka shirkadatan magaca weyn ee barakada badan waxaan oo dhan
xaggee bay ka keentay?????????
Nin la yiraahdo Mr. Ahmed Cali oo ka mid ahaa shaqaalaha hoose
ee Bankiga Islaamka ayaa aasaasay A.B ka dib bilawgii dagaalkii
sokeeye . Ninkaas wuxuu ka tegay shaqadii Bankiga bilawgii
sideetamaadkii wuxuuna xawaaladda Sucuudiga u qaban jiray niman
shirko ahaa oo la kala dhihi jiray Xashi Weheliye iyo Kamaaludiin.
Bilawgii shagaashanaadkii shirkad kale ayaa kaga horeeysay xagga
xawaaladda sida Dhiigshiil, lakiin mudddo yar gudahood A.B waxay
si xowli ah uga hor martay shirkadihii kale.Arrintaasna waxay ku
timid shirkadda oo maamulkeedu uu wanaagsanaa iyo iyadoo heshay
maalgelin khaasatan intii ka dambeysay dagaalkii Caydiid iyo
Mareykanka ee uu Usaama uu cadeeyey in uu ka qeybgalay.
!995, waxay jariidadda la yiraahdo Economist ay qortay A.B
warbixintii Washington oo kaale. Intaan maqaalkaan aan soo
qorinna waxaan isku dayey in aan warbixintaas aan raadiyo lakiin
waa ay ii suurtoobiweeysay.
Isla sanadkaasna , Mr. ahmed oo ah ninka dhanka somalida ugu hantida
badan ee AL-BARAKAAT ayaa damcay in uu tir tiro raad raaca
maalgelinta A.B meesha ay ka timid iyo lugta uu ku leeyahay
Usaama. Sidaas darteed, wuxuu shirkadda ka dhigay mid saamileey ah
isagoo inta ugu badan heysanaya iyo maamulkeeda oo aan looga daba
hadli karin. Arrintaas fulinteedana waxaa caawiyey nin ay isku reer
yihiin oo Holland wax ka bartay oo u keenay A.B firkadda Telefoonada
oo awoodeeda si aad ah Somaliya oo dhan ay ku faaftay.
Wakhtigaas iyada ah, qof aan saaxiib nahay ayaa rabay in uu saamiyo
uu ka iibsado A.B, aniguse waxaan soo xasuusiyey warbixintii The
Economist laakin saaxiibkey fikradeyda wuu diiday.11ka Seb.2001 ka
ayaa saxiibkey mar kale wuxuu ii sheegay in sheerarkii uu ka gatay
A.B uu aad uga faaíidey. Nasiib darro, qaraxii Mareykanka ka dib
ayuu telefon ii soo soo diray ee uu iigu sheegayo in uu ku qaldana
taladeyda uu diiday iyo in ay qalad aheyd in A.B uu wax ku darsado.
Haatanna, Somalida uu qeylineysa A.B marka laga reebo reerka iska
leh iyo Usama waa kuwa la mid ah saxiibkeyga xisaabtu ka qaldantay.
Guud ahaan Somalidu waxay iska dhigaan dad wadani , waxaanse
xasuusinayaa in qofka wadaniga ah uusan reerkiisa ku taageerin
qaladka iyo heysashada dhulka reero kale ay leeyihiin sida
AL-BARAKAAT. A.B waxay iska dhigaan dad muslimiin dhab ah inay
yihiin isla markiina waa casabiyiin, casabiyana ma aha muslin-nimo!
Nin lagu tilmmao in uu ahaa aabaha taariikhda aduunka oo la oran
jiray Inb Khaldun ayaa wuxuu yiri in xukunka muslinka ah aa ee aan
caadilka aheyn uu dhaamo xukunka gaalada ee caadilka ah!
Sidoo kale, nin Somali ahna wuxuu yiri :-
" MUSLIN-NIMO NINKAAN KUGULA SOCON
MUUMIN-NIMO KHAAS AH ,
GAAL MAXASTA KUU DHOWRA EE AAD MAGANSATAA DHAAMA".
< bakool55@hotmail.com >